baburam bhattarai – Karnalisandesh
एमालेका सांसदले राजीनामा दिनुपर्छ: डा.भट्टराई
काठमाडौं। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौति दिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले संसदलाई २/२ चोटी विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणी गरे। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले अलिकति पनि नैतिकता छ भने एमालेका सांसदहरुले संसद अवरुद्ध पारेर बस्ने नभई राजी
‘चिठ्ठी आदानप्रदानसहित एमसीसी कार्यान्वयन गरौँ’
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अमेरिकासँग चिठ्ठी आदानप्रदानसहित एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। एमसीसीको विषय राष्ट्रिय बहस बनिरहेको बेला भट्टराईको यस्तो भनाइ आएको हो। उनले लेखेका छन्, यसमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ १.उच्चस्तरीय राजनीतिक कूटनीतिक वार्तामार्फत
‘अरूलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान सक्छ’
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालमा सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। देशको आन्तरिक दलीय राजनीतिलाई वैदेशिक कूटनीतिसँग छासमिस गरियो भने त्यसबाट कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भन्दा खतरनाक प्रतिगमनको नयाँ भेरिएन्ट जन्मन सक्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, देशभित्र स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरौँ तर विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम
नेपालमा मार्क्सवादको बदनाम गर्यौं: डा.भट्टराई
काठमाडौँ। जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुरामले २१औं शताब्दिमा कार्ल मार्क्सवादको हुबहु लागू हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। बिहिबार राजधानिको कमलादि स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै १९ शताब्दिमै मार्क्सवादको कार्यभार पूरा भएको स्पष्ट पारेका छन्। डा‍‍‍.भट्टराईले जनवादी केन्द्रीयताको नाममा नेपालका कम्युनिष्टहरूले २० वर्षसम्म आफैलाई टिका लगाउने र नेता बन्
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पहिलो वरियतामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई छन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार अध्यावधिक गरेको कार्यकारिणी समितिको पहिलो वरियतामा डा.भट्टराईको नाम उल्लेख छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम दोस्रो वरियतामा छ। तेस्रो वरियतामा वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई र चौथोमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई राखिएको छ। त्यसपछि भने वर्णानुक्रमअनुसार अमृत
जसपा विवाद: उपेन्द्रको पक्षमा बहुमत पुग्यो
काठमाडौँ। आन्तरिक विवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकाे पक्षमा बहुमत पुगेकाे छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरेका थिए। सत्ता समीकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र इत्तर गठबन्धनका विषयमा उत्पन्न विवादले जसपा विभाजनमा पुगेको थियो। सोही विवादका बीच ठाकुर पक्ष ओलीतिर र यादव पक्ष पाँच दलीय गठबन्धनमा लागेपछि जसपा दुई भागमा
‘भष्मासुर ओलीको बिदाई गर्ने कांग्रेसको निर्णय सह्रानीय’
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिपक्षीय धर्म निभाउने कांग्रेसको संकेतलाई सह्रानीय भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको निर्णयलाई डा. भट्टराईले सह्रानीय रुपमा टिप्पणी गरेका हुन्। उनले शनिबार बिहान ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्रतिपक
काठमाडौँ। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग पटकपटक भेटघाट गरेको खुल्न आएको छ। यसबाट दाहालले भट्टराईसँगको पुरानो सम्बन्धलाई पुनः दोहोर्याउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। अहिले अलगअलग दलमा भए पनि यी दुवै नेता शीर्ष स्थानमा छन्। दाहाल–भट्टराई सम्बन्ध निक
‘राज्यशक्तिको आडमा ओलीले खड्ग चलाउँदैछन्’
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा ‘हिट्लर’को उदय भइरहेको बताउँदै त्यसबारे सबै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ सङ्केत गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। पार्टी र राज्यको शक्ति आफूमा केन्द्रीत गर्दै ओलीले सबैमाथि खड्ग चलाउन थालेको उनको जिकिर छ । उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हिटलरबारे चर्चित भना
सत्ता समिकरणलाई लिएर जसपामा विवाद
काठमाडौँ। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जसपा कसैको पुछ्छर बन्न नहुने बताएका छन्। सत्ताको नेतृत्वका लागि तयारीमा जुटेको जसपा सत्ता समिकरणको विषयलाई लिएर विभाजित बनेको छ। बिहिबार बस्ने भनेको कार्यकारणी सभाको वैठक ‘तयारी नपुगेको’ भन्दै स्थगित भएको छ। बैठकले संसदीय दलको नेताबारे एउटा निष्कर्ष निकाल्ने, सत्तामा कुन पक्षसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने र